Yakaderera muchitoro chepamhepo cheApple cheApple Watch Series 5 LTE | Ndinobva mac
Yakaderera stock muApple online chitoro cheApple Watch Series 5 LTE
Zvishoma nezvishoma zuva iro Apple ichaburitsa iyo itsva Apple Watch Series 6 iri kusvika uye mamodheru aripo eiyo Series 5 zvechokwadi achabviswa muzvitoro zvefemu. Mupfungwa iyi, Apple online chitoro (paApple.com) inoratidza yakajeka "isingawanikwi" yeApple Watch Series 5 44mm ine LTE. Mawadhi eApple pawebhu haawanikwe kuti atenge uye izvi zvinowedzera runyerekupe nezve zvavanogona kutsiva mumwedzi waGunyana, tichaona zvinoitika.
Kana isu tichitsvaga 5mm Apple Watch Series 40 neLTE, izvi zviripo muchitoro chepamhepo. Mune mamwe emamodeli e44 mm, iwo chete anowanikwa ndeaya ane GPS, saka nenzira isina kunanga Apple iri kutiudza kuti munguva pfupi tinogona kuva newachi iripo.
Zvinoshamisika kuti ese mamodheru ane hunhu aya anoratidzwa akatengeswa kunze muchitoro chepamhepo, saka zvakajairika kuti fungidziro dzinomutswa nezvekuuya kwekutsiva kwavo. Mupfungwa iyi, iyo Apple Watch uye iyo nyowani iPad inogona kuiswa uye kuvhurwa inotevera Gunyana uyezve taizove nenhau nezve iyo iPhone 12, iri kuuyawo mwedzi uno kana kunyangwe muna Gumiguru sekufungidzira kunoita vaongorori.
Iyo iri kuuya Apple Watch Series 6 ichaisa nyowani yekutevera maficha anonyanya kutarisana nehutano hwevanhu, kuongorora kweropa oksijeni, kugona kwakakwenenzverwa kweECG, kunetseka kwenzvimbo yekutarisa, uye zvimwe zvinoenderana. Aya mamodheru eApple Watch angadai akapinda mudhatabhesi yeEurasia, saka ivo vari kuswedera padyo nepedyo senge itsva iPad mhando.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakaderera stock muApple online chitoro cheApple Watch Series 5 LTE
Isu takaedza iyo itsva Ring Vhoriyamu bhero 3 Plus uye iyo Chime
Iyi iMac ndiyo diki kwazvo pasi. Ine hunyengeri